Qiso Xanuun Badan: Nin Xaaskiisa Shaki Qaldan Ka Qaaday Oo Mucjiso Lagu Tusay Raalliyannimadeeda.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: January 12, 2017, 10:23 pm
(2) Comments Waxaa jiri jirtay inan yar oo agoon ahayd oo hooyadeed ahayd cidda keliya ee adduunka u joogta, waxaa guursaday ina’ adeerkeed. Laakiin waxa uu ku noqday nin qallafsan oo dulmi badan u geystay, isaga iyo ehelkiisuba waxa ay xumeeyeen inantii oo ay ula macaamileen sida adeegto iyaga u shaqaysa. Waxaa u dheeraa aflagaado iyo gacan ka hadal badan.
Qisadan uu Kobciye.com afsoomaaliga u rogay oo uu ka soo xigtay wargeyska Al-Jamhuuriya ee ka soo baxa dalka Masar waxa ay intaas ku dartay, Inantani marka ay dareento in dulqaadkii iyo adkaysigii ka dhammaanayaba waxa ay tegi jirtay halka ay adduunyada ugu jeclayd oo ahayd gosha hooyadeed, si ay maalintaa ugu soo nafisto, naftana u tusto in ay jirto cid ay agteeda qiimo ku leedahay.
Sidauu sheegay wargeyska uu Kobciye.com soo xigtay oo caddeeyey in qisadani run tahay, maalinkaas sidii ay isugu ooyayeen ayaa gabbal u dumay oo go’aansadeen in ay qolkan karaamaysan ee Alle isugu hadeeyey u hoydaan. Waxa se’ dhacday arrin kale oo dareenka taabanaysa, waxa ay gabadhii ku riyootay, qof aanay arkayn oo inta uu u yimid ku leh, “Toban sano ayaa aad u cabanaysay dadka qofkii kuugu dhowaa, waxba se kuma’ uu tarin. Bil keliyana waxa aad u cabatay Ilaahay, (SWT) markaasuu xaalkaagii oo dhan beddelay.”
« Warbixinta Ka HoreysayTalooyin Kusaabsan Sida Loo Dhiso Hadafka….	Warbixinta Xigto »DHAGEYSO: Magaalo Somalia ka tirsan oo Go’aan laga gaaray Lacagta laga qaadayo Wiilka Aroosaya?	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	2 Comments : Qiso Xanuun Badan: Nin Xaaskiisa Shaki Qaldan Ka Qaaday Oo Mucjiso Lagu Tusay Raalliyannimadeeda..
ibrahim jibril rayale says:	January 14, 2017 at 2:52 pm	allah blessing kobciye
ibrahim jibril rayale says:	January 14, 2017 at 2:54 pm	thank you very much kobciye website